Allaha U Naxariistee Suldaan Cabdi Cali Sokor Oo Maanta Aas Qaran Loogu Sameeyey Magaalada Kismaayo | Radio Muqdisho
Allaha U Naxariistee Suldaan Cabdi Cali Sokor Oo Maanta Aas Qaran Loogu Sameeyey Magaalada Kismaayo
Published on February 2, 2013 by admin · No Comments · 2,217 views
Allaha u naxariistee Suldaan Cabdi Cali Sokor oo ka mid ah salaadiintii gacanta weyn ka geysatay in dalka uu ka gudbo KMG islamarkaana uu u gudbo dowladnimo buuxda ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.
Aaska Suldaanka waxaa ka qeybgalay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta,Isgaarsiinta,Boostada iyo Gaadiidka Xukuumadda Soomaaliya Mudane C/laahi Ciilmooge Xirsi, xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka,Saraakiil, Mas’uuliyiinta maamulka magaaladaasi, culumaa’udiin uu ka mid yahay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolada Jubooyinka.
Meydka Suldaanka ayaa waxaa barqanimadii maanta lagasoo dejiyey garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayadoo salaadii janaasadana lagula tukaday garoonka diyaaradaha magaaladaasi waxaana ugu dambeyn lagu aasay qabuurro ku yaala magaalada Kismaayo.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo isaguna ka mid ah Culumaa’udiinka ugu caansan dalkeenna oo ka hadlay madasha Aaska ayaa tacsi kadib waxa uu tilmaamay in Alle ha u naxariistee Suldaan Cabdi Cali Sokor uu ahaa shaqsi inta badan nabadda Soomaaliyeed iyo hormarka umaddaba waqti badan u huray.
Alle ha u naxariistee Suldaan Cabdi Cali Sokor oo ka mid ahaa salaadiintii Muqdisho mudada fog u joogtay sidii dalku uga gudbi lahaa KMG ayaa waxa uu ku geeriyooday maalin ka hor magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayadoo maantana aas heer Qaran ah loogu sameeyey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose.